I-World's Series Series ye-Baseball Sho Shot Hall of Shame
AmaHighesi ukuya kwiZero: I-World's Series Series ye-Baseball Sho Shot Hall of Shame
Akukho mntu owaziyo ukuba kulula kangakanani ukuba uhambe ukusuka kwiqhawe kuze kube yilapho kunomdlali onguchwepheshe. Ezinye zezona zihlandlo ezinkulu zebhola ze-baseball zize kwi-World Series, kodwa abanye abantu abaye badlala kwilo nqanaba elikhulu baye bawazi uhlobo oluthile loqhawulo: ukuchithwa kobugebengu.
Eqinisile, abanye abadlali abafanelekileyo kakhulu kumaqela aphezulu baye babelana ngokukhanya kwe-Oktobha baseball, ngeli xesha behleli phantsi kohlobo oluthile lokukhanya phantsi kwekomkhulu lamapolisa.
Yikhohlwa usuku lwefoto. Ukunikezwa nge-alfabhethi, nantsi imifanekiso ongeyi kubona kwikhadi lebhola le-baseball: iifoto zamapolisa ezityholwa ngamabhola kunye nezigwebo ezilahlwayo kwi-World Series edition ye-Mug Shot Hall of Shame.
Wally Backman: Umphathi weeNyanga ezine
Wally Backman Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
UWally Backman utshilo .333 waza wafumana amanqaku amane kwi-World Series ka-1986 njengoko i-New York Mets ibetha iBoston Red Sox. I-Series Series ka-1986 yabona i-Sox ingena kwisinye isihloko sayo sokuqala ukususela ngo-1918, kuphela ukubona lelo thuba liphuma phakathi kwemilenze kaBill Buckner ngendlela yebhola elityhutyhileyo esuka kuMokie Wilson.
Umsindisi wadlala kude kube ngo-1993, kwaye ngoNovemba 1, 2004 kwaqashwa ukuba kulawulwe i-Arizona Diamondbacks. Kwiintsuku ezine kamva, waxoshwa njengoko izibilini zakhe zaphuma ziza kumnxusa: Umsindisi wayebanjwe ngo-2000 kwiindleko ze-DWI, kwaye kwakhona ngo-2001 ngokudlwengula umkakhe.
Umsindisi ekugqibeleni wayegwetywe ngokuqhuba umqhubi phantsi kwempembelelo, waza wacela unetyala lokuhlukumeza kakubi. Umsindisi uye wavakalisa ukuchithwa.
I-Tragedic Tale yeKen Caminiti
Ken Caminiti Mug Shot. Ifoto yamapolisa
UKen Caminiti wayenakho konke umdlali we-ballplayer angafuna: Iiglovu zeGolide ezintathu, iintlobo ezintathu zeMidlalo yeMidlalo, i-award ye-MVP kwaye ngo-1998, ukubonakala kweMbali yehlabathi. Wahamba u-2 ukuya kwe-14 ukuya kwisiqingatha .143 njengokuba iPadres yakhe yachithwa yiNew York Yankees, kunye neminyaka embalwa kamva, ubomi bakhe behlukana.
I-Caminiti yamkela ngo-2002 ukuba wayesebenzise i-steroids ngexesha le-1996, xa ephumelele uMvuzo wakhe oxabisekileyo kakhulu kuMdlali, nangaphezulu. Kwaye iingxaki zeziyobisi kunye neengxilwa ayezilwa kulo lonke umsebenzi wakhe ziza kuba zimbi ngakumbi emva kokuthatha umhlalaphantsi.
Wabanjwa ngo-2001 ngenxa yelifa le-cocaine, kwaye wavavanyelwa ukuba unobungozi bonyango ubuncinane kathathu emva koko. Ngo-2004, wafa ngenxa yokugqithisa kweziyobisi e-New York City.
I-Godfather yeSteroids: I-Arrest Record yaseJose Canseco
Jose Canseco Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
UJose Canseco wayenemibala ebomvu njengowuphi na umdlali we-ballplayer: wawunqoba i-Rookie yoNyaka we-Award ngo-1986, uMdlali oxabisekileyo kakhulu ngo-1988 kwaye wayeyinkwenkwezi yexesha eli-6. Wayengumdlali wokuqala webhola lokushaya ii-homers ezingama-40 aze athabathe iziseko ezingama-40 ngexesha elifanayo. Kwakhona wabuya uvumela ibhola ukuba ikhuphe intloko yakhe kunye nodonga kwindawo yokuphuma ekhaya.
I-Canseco idlala kwi-World Series ngezihlandlo ezine: ezintathu nge-Oakland A, kunye kanye neNew York Yankees. Wayesecaleni lokuphumelela kabini, kwaye wawashaya .357 kunye ne-.500 OBP kwi-Series Series ye-1989 njengoko i-A ibeka i-San Francisco Giantes.
Kodwa akukho nanye yeyona nto i-Canseco eya kukhunjulwa ngayo. I-Canseco yayingumkhonzi ozinikeleyo kumandla we-steroids ukwenza umdlali ongcono - kungakhathaliseki ukuba imigaqo. Kwiincwadi, wabhala ukusetyenziswa kwakhe kweziyobisi, kunye nabadlali ababazisa kubo.
Kwaye unenkathazo nomthetho ngamaxesha ambalwa. Uboshwe malunga nogonyamelo lwasekhaya kunye nokuzisa iziyobisi phezu komda. Lo mfanekiso ubonakala uhambelana nesiganeko esiphuthumayo ekuqaleni kwawo-1980.
UJoba Uphula iMigaqo
Joba Chamberlain. UkuPhumela kwamaPolisa
U-Joba Chamberlain waqhekeza phantsi kweemigqaliselo phantsi kweemigaqo ejoliswe kumsindisa entweni yokulimala, "Imithetho Yoba." Ngoku, ufumanisa ukuba enye imithetho iyasebenza kuye.
Imbali yomxholo wehlabathi iyakubhalwa kulo mlambo weYankees, oye wafika kwi-Fall Classic yakhe yokuqala njengoko iYankees ithatha kwi-Phillies.
Kodwa ngo-2008, yena kunye neqela lakhe baphoswa i-playoffs ngokupheleleyo-ukubeka isigaba sokuwa kweentlobo ezahlukeneyo. U-Joba wabanjwa kwiphondo lakhe laseNebraska ngokusola ngo-DWI, kwaye ekugqibeleni wacela ityala lokunxila. Ngethuba lokumisa kwakhe, ividyo zee-dashboard zevidiyo zabonisa uClainlain ecaphukisa iNew Yorkers kunye neYankees icon Yogi Berra. Wagwetywa ukuvavanywa.
Dwight Doc Gooden: Umsebenzi wePhakamileyo kunye neLows
Dwight Gooden Mug Shots. UkuPhumela kwamaPolisa
Xa uDwight "Doc" uGoenen wangena kwii-majors kunye neNew York Mets wayeneCrostown ebhalwe phantsi kwakhe. Ngamaxesha akhe okuqala amahlanu kwi-Bigs, waya ku-91-35 kunye ne-Cy Young kunye ne-World Series. Ngethuba lakhe lo msebenzi, wayeyaziwa kakhulu ngenxa yengxaki yakhe ngomthetho njengetalente zakhe kwindunduma.
Nangona wafaka kwiCandelo elilodwa leMhlaba, uBonen wayekho kumaqela amathathu ophiswano: ii-Mets zika-1986 kunye ne-1996 ne-2000 eNew York Yankees.
UGoenen wayenenkathazo yokusetyenziswa kakubi kweziyobisi kwaye uye waphuma kwaye waphuma kwi-rehab kule minyaka. Uphinde wabanjwa ngenxa yokuhlaselwa kwipolisa, ukusela nokuqhuba, ukuqhuba ngokuqhuba ilayisenisi elusisiwe, ulwaphulo lwasekhaya kunye nokuphulwa komthetho.
UTony LaRussa: Ulele eWolweni
Tony LaRussa Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
Akukho mntu wamtyhola uTony LaRussa wokulala evili. Umphathi wexesha elide webhola le-baseball unomdla njengendoda engaphuthelwa into. Nangona engazange afinyelele kwi-Fall Classic njengomdlali, uholele amaqela amahlanu kwi-World Series, aphumelele kabini, kanye nakwiqela elilodwa: i-Oakland A ka-1989 kunye ne-St. Louis Cardinals ka-2006.
Kodwa i-World Series iindandatho azizange zibaleke kakhulu xa amapolisa ayifumene ehleli kwindawo yokukhanya kwezithuthi e-Jupiter, eFlorida ... elele. Ekugqibeleni uLaRussa wavuma ityala lokuqhubela phambili phantsi kwefuthe kwaye wavuma ukukhonza ubuncinane ubunzima beenyanga ezintandathu, ukuhlawula i-$ 678.50 yeefayile kunye neeyure ezingama-50 zenkonzo yoluntu kunye nokuhamba ngeziko le-DUI.
UJim Leyritz: "UKumkani" utyholwa kwiCatal Crash
Jim Leyritz Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
U-Jim Leyrtiz utshitshise enye yeyona nto ekhunjulwayo kwikhaya le-World Series iqhubekile kwiNew York Yankees, kodwa ngoku, i- persona non grata- kwaye njengoko i-post post 2009 yaqala, yabonwa kwitafile elandayo ngapha kwesitalato esuka kwiYankee Stadium ukuhlawula i-$ 5 ifoto.
ULeyritz wabonakala kwi-World Series epheleleyo, ebetha i-home run ephendulela umzila we-1996 Classic ukuthanda iNew York Yankees. Kwakhona wabetha indlu yokugqibela yasekhaya le-20 leminyaka ngexesha le-1999 Series.
Kodwa ngo-2007, uLeyritz wahlawuliswa ngokubulala i-cartoon eFlorida. Amapolisa athi bobabini abashayeli banxila, kwaye uLieyritz naye uqhuba ngokuqhuba ilayisenisi.
UBrett Myers Utyholwa ngumfazi wokubetha
Brett Myers Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
UBrett Myers nguye kuphela umgodi wePhillies ukulahlekelwa ngumdlalo kwi-World Series ka-2008 ngokubhekiselele kwiTrapa Rays. Nguye kuphela u-Philadelphia ballplayer wama-2009 kwi-World Series Mug Shot Hall ye-Shame.
U-Myers waboshwa eBoston ngo-2006. Amapolisa athi umfazi wakhe wayekhala ebusweni, kwaye wathi amaNgqina awaxelela ukuba uyamxabela aze amthathe izinwele.
Kamva, uKim Myers utshele iziphathamandla ukuba bobabini bephuza, kwakungekho nto yokulwa, kwaye wabakhuthaza ukuba bahlawule iirhafu. Aba babini baye baxhaswa ngomtshato, ngokwe-MSNBC.
U-Kirby Puckett: Ukuwa kwe-Minnesota Twins Icon
Mugby Puckett Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
Ixesha elilishumi elinama-All Star Star Kirby Puckett yayiyiqhawe le-World Series, kunye neqhawe leMidlalo 6 ye-World Series ka-1991 ngokubhekiselele kwi-Atlanta Braves-yakhunjulwa njengenye yeyona mdlalo efanelekileyo kakhulu.
Kodwa emva kokuthatha umhlala-phantsi, iHolo-of-Famer yaqala ukukhetha uhlobo oluthile. Umfazi wakhe wangaphambili wathi kumapolisa wayesongela ukuba ambulale, kwaye watshela i- Sports Illustrated ukuba wazama ukumbamba, wamvalela kwisitoreji waza wafaka isibhamu phezu kwentloko yakhe.
U-Puckett uphinde wityholwa ngokugubungela ibhinqa kwindawo yokudlela yokulala, ekhokelela kulo mgca. Nangona wawabetha iindleko, udumo lukaPuckett aluzange lusekho.
UPuckett wafa emva kokuxhatshazwa ngo-2006.
UKenny Rogers: Umngcaka uboshwe kwi-Cameraman Attack
Mugxina we-Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
U-Kenny Rogers ubonakale kwi-World Series series-ukuphumelela nangona usebenze kakubi kunye neeYankees zika-1996, kwaye ulahlekelwe nxamnye nokusebenza ngamandla kunye ne-2006 Detroit Tigers.
Kodwa i-Baseball yomdlalo wokuGembula iza kukwaziwa ngonaphakade nge-tirade ephawulekayo ebanjwe kwi-tape ngo-2005, xa wayeseTexas Rangers. URogers, obonakala ukuba akafuni ukufowunjwa, wachukumisa ama-cameramen amabini aze akhange ikhamera. Kamva wamangalelwa ngokuhlaselwa kakubi.
URogers wahlawuliswa, wamiswa ngokukhawuleza kwi-baseball waza wagqiba uqeqesho lwentlungu. Waphinde waxelwa enye yekhamera.
I-Deion Sanders: Akukho Nhlanzi ye-Star-Sport Star
I-Deion Sanders Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
UDionon Sanders wayeyinkwenkwezi eqinisekisiweyo kwi-baseball kunye nebhola. Nguye kuphela umntu omele adlale kuzo zombini i-Super Bowl ne-World Series. Ngomxholo wehlabathi we-1992, wayenomnye umntu osebenza ngomatshini osebenzayo: Yena .533 (8 ukuya kwe-15) kunye nokuhamba ezimbini, amabini amabini, iziseko ezintshontshiweyo ezintlanu, kunye neentambo ezine.
Kwakhona waba ne-run-ins kunye nomthetho. Lesi sithombe sivela kwimeko ye-1996 xa wabanjwa ngenxa yokuphambuka. AbakwaSanders, ababengabaseDallas Cowboys ngelo xesha, bafunyaniswa ukuloba kwisiza sezindiza saseFlorida, kwipropati esekwi-moya. Amapolisa athi akahoywa "kokungaziphathi mthethweni" kunye "nepropati yecala".
Wabanjwa ngo-1994 ngelixa i-Cincinnati Reds yehluleka ukubonelela ilayisenisi yokuqhuba kwaye inqabe ukuboshwa emva kokuchasana nomgcini wokhuseleko kwi-Riverfront Stadium.
I-Darryl Strawberry: Ixesha leengxaki kwi-Talented Slugger
I-Darryl Strawberry Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
AmaScouts abambona uDarryl Strawberry omncinci beqinisekile ukuba bebona ubungqina bexesha elizayo. Nangona i-Strawberry yayiza kudlalwa ekugqibeleni kwi-World Series Series (ngo-1986, 1996 no-1999), yahluleka kakhulu ukukwazi ukulwa neengxaki zezilwanyana kunye nemali.
Kule minyaka, i-Strawberry iye yahlawuliswa ngelifa lemfuyo, icela isondo, inqabile ekubanjweni kwayo indlu, iphula iingqinisiso, ukungaphumeleli ukuhlawula abantwana, kunye nokungaphumeleli ukuhlawula irhafu yengeniso.
UDontrelle Willis kwi-DUI Bust
Dontrelle Willis Mug Shot. UkuPhumela kwamaPolisa
UDontrelle Willis ufumana i-ring Series World njengelungu leqela le-Florida Marlins e-2003 elincinci leNew York Yankees.
Kwakhona wafumana ukuboshwa kwe-DUI ngo-2006 eFlorida. Amapolisa amhlangabeza emva kokumisa i-Bentley yakhe kabini, waza wathi wayebonakala edidekile kwaye enamehlo amnandi, intetho edibeneyo. Kamva wabuya enecala lokushayela ngaphandle.
Uhloniphekileyo: Ukusukela kuManny Ramirez ukuya kuDave Stewart
Abanye abantu baya kubanjwa, kodwa ngandlela-thile baphephe ukubona i-mugshot yabo ibhalwe kuyo yonke indawo. Iingqungquthela zeMVP zehlabathi ezimbini ziwela kulolu hlobo: UDave Stewart noManny Ramirez.
U-Dave Stewart wayenomsebenzi omncinci we-run-ins kunye nomthetho, kodwa isiganeko esibi kakhulu senzeke eLos Angeles ngo-1985, ngoxa uStewart wayelungu le-Texas Rangers.
UStewart wabanjwa kunye no-6'3 "uhenyukazi ogama lakhe linguLucille, owaba ngumgcini-mgcini." UStewart wathi akayazi "uLucille" wayengumntu (ogama lakhe lingu-Elson Tyler).
UStewart, owavela kwi-World Series Series, wayeyi-MVP ngo-1989 njengoko i-Oakland A ibetha iSiant San Francisco.
UManny Ramirez wabanjwa ngokungabi ncitshulwa emthunzini weYankee Stadium ngethuba lakhe le-1994 neRaveland yamaNdiya. Ngethuba lokuqhuma kwebhola, uRamirez wabuyela ekhayeni lakhe laseWashington Heights, apho amapolisa athi uyaqhuba ngokungahambi kakuhle kwaye wayenqanaba le-alcohol elingu -07, elalibhekwa "likhubazekile."
Ngokombiko we-Associated Press, umphathi wegosa uSteven Goetz uthi uRamirez "uthethile into ngokudlala eYankee Stadium kwaye ehlasele indlu." Kodwa andizange ndive ngaye.
Intombi kaRamirez iya kwindlu yakhe ukuze ifike ekhadini lakhe lebhodi lemizamo yokubonisa ibali lakhe, ngokwemibiko.
URamirez, owavela kwi-World Series Series ngenkathi ephethe i-Boston Red Sox, wayengu-MVP ngo-2004 njengoko iSox yanqoba iSt. Louis Cardinal.
Eminye imbalwa ehlonishwayo: U-Todd Stottlemyre, owavela ngo-1992 no-1993 Fall Classics njengelungu le-Toronto Blue Jays, wabanjwa kunye noStewart emva kokungqubana kwamapolisa ngaphandle kwe-nightclub yaseTampa. ULuis Polonia, owavela kwi-World Series ka-1988, ka-1995, ka-1996 kunye no-2000 kunye ne-A's, Braves neYankees, wayebanjwe ngokukhawuleza emva kokumangalelwa ngokulala ngesantombazana eneminyaka eli-15 ubudala. Wayekhonza iintsuku ezingama-60 ejele.
I-Sabermetrics yeBhola: ii-Acronyms kunye neenkcazo
Imikhosi ye "Ngubani Ofuna Ukuba Yizigidi"
I-Gutter Punk okanye i-Crust Punk Movement
Ukuhlasela kweNgilani: iMfazwe yaseStamford Bridge
Amazwe achaphazelekayo kwiMfazwe Yehlabathi I
Indlela yokuziqhuba ngebhola yebhola yebhola yeBhola ngokusebenzisa iNgcamango kunye neBlue Imaginary
Gwema ukunyuka kokulimala ngo-Climbing Smart
Iincwadi eziHlola eziPhambili ze-ISEE kunye ne-SSAT
Yintoni i Sky Sky?